TRUESTORY: ဦးရွှေမန်း ဘယ်ခြေကို လှမ်းသလဲ......
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး
ရန်ပုံငွေ ဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်က
အတည်ပြုလိုက်တယ်…… ဒါနဲ့ ပါတ်သက်
လို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က
အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်
ပိုင်ခွင့်ကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ
မှ လုပ်ဆောင်ရန် ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိကြောင်း” ဆိုပြီးမှတ်ချက် ပြုထားခဲ့တယ်…… ဒေသဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေက လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက် သိန်း ၁၀၀၀ ပေးပြီး သူတို့ တာဝန်ကျရာ မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေ လုပ်ခိုင်းတဲ့ ကိစ္စ…….. ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်အမတ်တွေပဲ လုပ်လို့ အဆင်မပြေတဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသ အာဏာပိုင်တွေက ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ရတယ်…….
သက်ဆိုင်ရာ ဒေသ အာဏာပိုင်တွေက ပူးပေါင်း ပါဝင် လုပ်ဆောင်မှု မရှိရင် လွှတ်တော်ကနေ ပြန်ကြပ်တော့ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက လုပ်လက်စ အလုပ်တွေဘေးဖယ်ပီး လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးစားပေးလုပ်တဲ့အခါ လုပ်လက်စ အလုပ်တွေက တန်းလန်း နယ်မြေခံတွေရဲ့ မကျေလည်မှုတွေ၊ အလုပ်ကို ပြီးအောင်မလုပ်ပဲ တန်းလန်းထားတယ် ဆိုတဲ့ အမြင်မကြည်မှုတွေ ဖြစ်လာတယ်…..
လွှတ်တော်အမတ်တွေက သူတို့ ဒေသဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်တာ ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် လုပ်မယ့် ကိစ္စမှန်သမျှမှာ လစ်မစ်က ရှိနေတယ်…… တစ်ခုကို သိန်း ၅၀ ထက် မပိုစေရဘူး……. ဒီတော့ ထော်လော်ကန့်လန့် ဖြစ်နေတယ်…… တို့တိ တို့တိ လူမြင်ကောင်းအောင် လုပ်ခိုင်းသလို ဖြစ်နေတယ်…….
လွှတ်တော်အမတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ကို လွှတ်တော်ကနေ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရကို ဖိအားပေးရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်တာဟာ အစိုးရ ယန္တရားကို ဝင်ရောက် ချယ်လှယ်တာနဲ့ မကွာခြားလှဘူး…….. တနည်းအားဖြင့် လွှတ်တော်အမတ်က ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးကို တစ်ပိုင်းတစ်စ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှုပဲ….. ဒါဟာ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအရ ရှုပ်ထွေးမှုကို ဖြစ်စေတယ်…..
ဒီဥပဒေကို ဘာလို့ ဦးရွှေမန်းက အတည်ပြုလဲ မေးစရာ ရှိလာတယ်…….. မနှစ်က လွှတ်တော်မှာ ကိုယ်ပိုင် လုံခြုံရေး တောင်းခံခဲ့တယ်…… လွှတ်တော် ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ရာထူးတွေတစ်ဆင့် တိုးပေးခဲ့တယ်…….. အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာက ဝန်ထမ်း ရွေးချယ် လေ့ကျင့်ရေးက ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို ဂရုမစိုက် မျက်ကွယ်ပြုပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်ရာ လုပ်သလို ဖြစ်နေတယ်…….. လွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်က စည်းကမ်း စဖောက်တာ ကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်တော့ မဟုတ်ဘူး……
လွှတ်တော် ဝန်ထမ်းတွေကို ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် ထိမ်းချုပ်တယ်၊ လွှတ်တော်ကို ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်ဖြစ်အောင် ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးထားဖို့ ကြိုးစားတယ်……. လွှတ်တော်ရဲ့ နယ်မြေ တည်ဆောက်ပုံကလည်း ကျုံးပါတ်လည် ကာရန်ထားသလို ဖြစ်နေတယ်…… ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေး အဆင်မပြေတဲ့အခါ ဒေသဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ လွှတ်တော် အမတ်တွေကို ထိမ်းချုပ်တဲ့အပြင် ဥပဒေပါ အတည်ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်တယ်………
လွှတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့လည်း ဒေသဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရံပုံငွေ ခေါင်းစဉ် ဥပဒေနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကို စွက်ဖက်ခွင့် ရှိတဲ့အတွက် အာဏာပြစေဖို့ အခွင့်အလမ်း တစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ်……. ဒါတွေဟာ ဒေသခံ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ငြိစွန်းနိုင်မယ့် အခြေအနေတွေ အများကြီးရှိတယ်…….
လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ ခါးပိုက်ထဲ ဆွဲထည့်ထားသလို၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမှု အပြည့်ရှိနေတဲ့ ဦးရွှေမန်းရဲ့ နားလည်မှု ခြေလှမ်းတွေဟာ စဉ်းစားစရာ တော်တော်လေး များလာတယ်…… သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ နှစ်ဦးဆွေးနွေးပွဲမှာတောင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာရှိ ဒေါက်တာ ဇင်မာအောင်ပါမှ ဆွေးနွေးခန်းကို ဝင်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်စုဟာ ဦးရွှေမန်းနဲ့ နှစ်ဦး ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဒေါက်တာ ဇင်မာအောင် အပြင်ထွက်နေရတဲ့အထိ ယုံကြည်မှုနဲ့ လျှို့ဝှက်မှုကို တည်ဆောက်ယူထားတဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းခြင်းရာဟာ ဘာတွေလဲ……..
ဒေသဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရံပုံငွေ ခေါင်းစဉ်အောက်က လွှတ်တော် အမတ်တွေကို ထိမ်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားမှု နောက်ကွယ်မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံပါ အခန်း ၉ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊ ပုဒ်မ ၃၉၆ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း အပိုဒ် (က) အပိုဒ်ခွ (၃) အကျင့်သိက္ခာ ပျက်ပြားခြင်း ဆိုတာဟာ အညှာတစ်ခု ဖြစ်နေမလား စဉ်းစားမိတယ်…..
သိပ်မကြာသေးခင်ကပဲ ကြံ့ဖွံ့ အစည်းအဝေးမှာ လာမယ့် ၂၀၁၅ ကြံ့ဖွံ့နိုင်ရမယ်လို့ ကြွေးကျော်ခဲ့သူ တစ်ယောက်၊ လွှတ်တော်ကို လိုသလို ပုံဖေါ်နေသူတစ်ယောက်၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ခါးပိုက်ထောင်ထဲ ဆွဲထည့်နေသူတစ်ယောက်၊ ဒီမိုကရေစီ အိုင်ကွန်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့် ရှိလာအောင် လုပ်ထားသူတစ်ယောက်၊ ၂၀၁၅ မှာ သမ္မတ ဖြစ်ချင်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ လှမ်းလာမယ့် ခြေလှမ်းတွေက ဘာဖြစ်မလဲ တွေးစရာပါ…….
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတောင် အခန်း (၁၂) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်း ဆိုတာကိုတောင် လိုသလို ပြန်ပြင်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ လွှတ်တော်ကို ထိမ်းချုပ်ထားနိုင်တာ အခရာလို့ပဲ ဆိုရမယ်…… ဒါမှလည်း လွှတ်တော်ကနေ အစိုးရကို ကောင်းကောင်း ကြပ်လို့ ရမယ့် သဘောမှာ ရှိတယ်…….. တစ်ချိန်မှာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ရံပုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ ဥပဒေဟာ ရည်ရှည်အတည်ဖြစ် မလား၊ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းမလား ဆိုတာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပဲ…..
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ကတော့ ဒီလို စနစ်တကျ Terriority တည်ဆောက်နေမှု နောက်ကွယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ပွတ်တိုက်မှု၊ ထိရှမှု၊ ခြေလှမ်းတွေဟာ အင်မတန် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်ပဲ ဆိုရမယ်…….. ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို မလိမ့်တပါတ်လုပ်ရင်း လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ကိုင်ပိုင် Terriority ထဲဆွဲထည့်ထားတဲ့ ခြေလှမ်းဟာ အင်မတန် ရဲတင်းလွန်းတယ် ဆိုရမယ်…… ကျွမ်းကျင်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ မုဆိုးဟာ လောဘဇောတက်လာတဲ့အခါ ကိုယ်ဆင်ထားတဲ့ ထောင်ခြောက်ကို ကိုယ်ပြန်ရောက်သွား တာမျိုး ဖြစ်လာမလား၊ ကိုယ်တိုင် သမ္မတ ဖြစ်လာချိန်မှာ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားကို ခြေထိုးခံတဲ့ ဒီလို လုပ်ရပ်တွေကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းမလား ဒါတွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာတွေပဲလို့ တွေးရင်း ၂၀၁၅ မရောက်ခင် အခြေအတင်တွေကြောင့် စစ်တပ် အာဏာ ပြန်မသိမ်းပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းပါစေလား……….
From: Voice of James Mint